Obodo Seychelles: Ulo oru gi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Obodo Seychelles: Ulo oru gi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ka ndụ na-agbanwe ọzọ, ndị ọkachamara na ndị na-atụgharị dijitalụ ugbu a nwere ohere iji jikọta ọrụ na ezumike na agwaetiti Seychelles, ụlọ gị na paradaịs. Hapụ ìhè ọkụ nke ihu gị na ịhapụ ọfịs na-arụ ọrụ na usoro ngwakọ ngwongwo n'ime ìhè anyanwụ na-enweghị atụ nke pristine paradaịs nwere ike ịmaliteghachi ihe okike ị na-achọ.
Akụkụ ọhụrụ na-eme ka Seychelles bụrụ ebe na -emepụta ebe pụrụ iche iji gbanwee na ịrụ ọrụ.
Ebe nke oge a ma dịkwa nchebe, agwaetiti ndị ahụ na-enye ebe dị mma maka ịrụ ọrụ nke ọma.
Were ya na ị na-arụ ọrụ na gburugburu ebe nwere osimiri dị jụụ na oke mmiri na oke ọhịa mmiri na ebe nzọ ụkwụ.
Ruo ọtụtụ iri afọ, agwaetiti ndị dị n’Oké Osimiri India eduhie ndị njem gaa n’ụsọ osimiri ya, nke na-eme ka agwaetiti Seychelles nwee aha nke ịbụ otu n’ime ebe ndị kasị chọọ n’ụwa. Site na ọnọdụ ya zuru oke, ịma mma nke okike na nnabata ụfọdụ n'ime osimiri a ma ama n'ụwa niile, agbakwunyere akụkụ ọhụrụ ugbu a na-eme ka Seychelles bụrụ ebe na -emepụta ebe pụrụ iche iji weghachi ma rụọ ọrụ!
N'ezie, Worldwa ọzọ, Seychelles na-enwe ite ọdịbendị na-agbaze na ọnụ ọgụgụ ndị na-asụ asụsụ atọ ebe ndị ọbịa na-anabata ndị ọbịa ọbịa ma jikọta ọnụ na ndụ agwaetiti. Ebe dị ugbu a ma dịkwa mma, agwaetiti ahụ na-enye ezigbo ebe maka ịrụ ọrụ nke ọma na udo, osimiri ndị zoro ezo na oke mmiri ozuzo nke ebe okpomọkụ naanị na-agbada.
Reconnect na gị kere onwe na nne Nature. Ọ bụ mgbe oge na-adịghị anya iji chee echiche ebe ị ga-anọ n'oge oyi ọzọ, yana nnukwu ihu igwe na-ekpo ọkụ nke ukwuu na-eme ka obi sie gị ike n'afọ niile, Seychelles bụ ebe kachasị mma iji gbanahụ obodo ndị na-arụsi ọrụ ike na ihu igwe oyi na-enweghị ọgwụ mgbochi achọrọ na ebe enyere visa mbata.
Nchebe dị oke mkpa na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ na-enweta ọzụzụ na asambodo siri ike ka ha bụrụ COVID-nchekwa na ọnụ ọgụgụ ndị na-etu ọnụ otu n'ime ọgwụ mgbochi kachasị elu n'ụwa.
Gburugburu osisi na ahịhịa na-enweghị atụ na ọtụtụ ụlọ ịhọrọ site na ya, agwaetiti Seychelles na-eme gburugburu ebe obibi zuru oke iji jikọta azụmahịa na obi ụtọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ezumike na-enyocha ma kwenye maka kwesịrị ekwesị maka ebumnuche 'ọrụ', sitere na ụlọ nkwari akụ mara mma, ụlọ ndị dị mma, ebe ntụrụndụ dị mma na ezigbo ụlọ ezumike nwere ike ịchọta maka dijitalụ na ọrụ nomad yana njem azụmahịa. Ihe ọbụla masịrị gị ma ọ bụ mmefu ego gị, ị nwere ike irite uru site na akụrụngwa nke oge a, ihe eji enyere ndụ aka yana oke nhọrọ nhọrọ ntụrụndụ n'otu ebe adịghị mma.
Mee nleta ọzọ gị na Seychelles bụ ahụmịhe ọrụ ọrụ! Ma ị bụ onye njem naanị gị, di na nwunye, ma ọ bụ ezinụlọ, agwaetiti anyị na-akpọ gị oku ka ị tinye mmasị gị maka njem na-eleghara ọrụ gị anya.
Chọpụta otu ị ga - esi mee Seychelles ebe ọrụ gị na https://workcation.seychelles.travel/
Ogologo mkpuchi: Olee otu njem nlegharị anya Czech na-emerụ ahụ ...
Accinegba ọgwụ mgbochi akwadoro nwere ike igbu oge ...
Tokyo kwupụtara COVID-19 ọnọdụ mberede mana Tokyo ...
Onye minista Seychelles toro ndị njem maka ...
Ihe nkwado Canada maka Delta-Driven 4th Wave nke COVID-19 ...